Somaliland oo jawaab ka bixisay hadal uu ka dhawaajiyay madaxweyne Xasan Sheekh (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Somaliland oo jawaab ka bixisay hadal uu ka dhawaajiyay madaxweyne Xasan Sheekh (DHAGEYSO)
Maamulka Somaliland ayaa jawaab tii ugu kululeed ka bixiyay hadalkii dhawaan kasoo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo ahaa inay weli dhiman yihiin hirgelinta in maamul loo sameeyo gobalada waqooyi iyo sidoo kale magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo hadalkaan ka sheegay munaasabadii lagu caleemo saarayay madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble oo maalintii Sabtida ahayd ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa yiri “Maamulka Hirshabeele ma ahan maamul goboleedkii ugu dambeeyay, weli waxaa noo dhiman in maamul loo sameeyo gobalada waqooyi iyo maqaamkii magaalada Muqdisho”.
Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta ee maamulka Somaliland Cismaan C/laahi Saxaradiid oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa sheegay in Xasan Sheekh looga baahan yahay inuu faraha iskala baxo arrimaha Somaliland, islamarkaana ay reer Somaliland yihiin dad marhore isku tashaday.
Wuxuu sidoo kale wasiirka sheegay in howsha Xasan Sheekh laga rabo ay tahay inuu heshiisiiyo maamulada Galmudug iyo Puntland oo muddo bil ku dhawaad ay ku dagaalameyeen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
“Waxaa Xasan Sheekh leeyahay iska iloow Somaliland, marhore ayay shacabkeeda isku tashadeen, waxaan kugula talin lahaa inuu heshiisiiyo umadda walaalaha ah Soomaaliyeed ee Galmudug iyo Puntland oo in muddo ah ku dagaalamaya islamarkaana uu dhiigoodu daadanayo” Sidaas waxaa yiri wasiirka warfaafinta maamulka Somaliland Cismaan C/laahi Saxardiid
Hoos ka dhageyso hadalka Xasan Sheekh iyo jawaabta wasiirka warfaafinta Somaliland